MAYELANA NATHI - I-Haiber Play Equipment (iShanghai) Co, Ltd.
IHaiber Play Equipment (iShanghai) Co, LTD, enesipiliyoni seminyaka engama-21 ekwakhiweni kwebala lokudlala, isebenzele inkampani enkulu yezindlu enjengeWanda, Wanke, i-Evergrande real estate, nabanye abakhi bezindlu abaziwayo eChina, nabaningi bezindlu ezinkulu zakwamanye amazwe izikhungo zokudlala ngomqondo wethu ovelele nekhwalithi.
Ukuhlinzeka abalingani bomhlaba wonke kusuka ekuhleleni, ekwakheni, ekucwaningeni nasekuthuthukiseni, ekukhiqizeni, ekwakheni, ekusebenzeni, nasekusetshenzisweni kwasendlini kwezokuzijabulisa kwangaphakathi kwezentengiselwano.
Iqembu lethu lomklamo wamazwe omhlaba, ngomklamo wobuciko, ohlanganiswe nemikhiqizo yokudlala ethambile engqayizivele, ngokusebenzisa idizayini yobuciko, ubeka zonke izinhlobo zemishini yokujabulisa imidlalo enomhlaba wekhasimende, udabule umngcele wesikhala, uzuze ubunye bendawo nesitayela semishini.
I-Haiber yaklama futhi yakhe indawo yokudlala yasendlini ngokuqinile ngokuya ngamazinga okuphepha aseYurophu naseMelika. Kudlule izinga le-ASTM lase-US, i-EN standard yase-Europe, kanye ne-AU standard ye-Australia. futhi wabamba iqhaza ekwakhiweni kwencazelo yezobuchwepheshe yokuphepha yokuqala yemishini yokuthambisa ethambile eChina. Lawa mazinga asetshenziswa yithi kuyo yonke imininingwane kusuka ku-r & d kuya ekukhiqizeni nasekufakweni.